Saddex Faa’iido Oo Saliidda Kalluunku U Leedahay Jidhka Aadamaha - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Saddex Faa’iido oo Saliidda Kalluunku u Leedahay Jidhka Aadamaha
Saddex Faa’iido oo Saliidda Kalluunku u Leedahay Jidhka Aadamaha
Saliidda kalluunku waxay ka kooban tahay saddex nooc oo la kala yidhaahdo. omega-3, EPA iyo DHA, Kuwaasoo dhamaantoo laga helo waxyaabo caafimaadka muhiim ah, sida ay shaaciyeen sannadihii u dambeeyay khubarada caafimaadku.
Saliidda kalluunka ayaa bani’aadamka ka caawisa dhinacyo badan oo caafimaadka la xidhiidha.
Haddaba qormadeenan maanta ee khayraadka baddaha waxaynu kusoo qaadan doonaa saddex qodob oo aad muhiim ugu ah dhismaha jidhka oo laga helo saliidda kalluunka.
Hoos u dhigidda subagga dhiiga:
Isticmaalka saliidda kalluunku waxay bani’aadamka ka caawisaa inay hoos u dhigto subaga dhiiga (blood cholesterol), taasoo heerka subagaas ka dhigta mid aan isbedbedlin. Tusaale ahaan haddii maalintii uu qofku isticmaalo saddex ilaa 6 garaam oo saliida kalluunka ah waxay ka caawin kartaa heerka subagga dhiiga oo aan keenin saamayn taban ama aan isbedbedlin.
Sidoo kale, haddii qofku bilaabo isticmaalka saliidda kalluunka, waxay qayb ka qaadataa ilaalinta miisaanka jidhka.
Koritaanka fiican ee lafaha jidhka waxa qayb weyn ka qaadata isticmaalka saliidda kalluunka.
Daraasado laga sameeyay arrintan ayaa tilmaamay in dhismaha lafaha jidhka iyo caafimaadkoodaba ay door ku leedahay isticmaalka saliidda kalluunku.
Sida ugu wanaagsan ee ay lafuhu u koraan, waa qofka oo hela kaalshiyaam ku filan, taasoo sida khubarada daraasadda sameeyay ay ku caddeeyeen in ay saliidda kalluunku qani ku tahay kaalshiyaamta ay lafaha jidhku u baahan yihiin, si ay u helaan koriin iyo caafimaad fiican.
Dejinta xaaladda nafsiyanka ah:
Daraasad ayaa tilmaantay in saliidda kalluunku ay hormood u tahay waxyaabaha isticmaalkoodu faa’iidada u u leeyahay deganaanta xaaladdaha nafsiga ah ee qofka.
Isticmaalka saliidda kalluunka ayaa qofka ama dadka ka caawisa dejinta maskaxda, waxaanay khubaro caafimaad oo arrintan daraaseeyay ay ku dooddeen in qofka isticmaala saliidda kalluunku uu maskaxiyan ka degan yahay qof aan isticmaalin, marka ay lasoo dersaan xaalado cakirani.
Sida aynu kusoo xusnay saddexdaa qodob ee sare isticmaalka saliidda kalluunku faa’iidooyinka ay leedahay waa kuwo muhiim u ah dhismaha muruqyada, isla markaana xoojisa, iyadoo aan si toos ah uga qayb qaadan dhismaha jidhka, balse si dadban faa’iido ugu leh dhismaha jidhka iyo caafimaadkiisaba, taasoo qofkana ka caawisa inuu qaban karo shaqo badan jidh ahaan iyo maskax ahaanba.
Haddaba akhriste, isku day inta karaankaaga ah ee aad isticmaali karto saliidda kalluunka iyo guud ahaan cuntada baddaba.
Previous articleWasiirka Caafimaadka Somaliland OO Ka War Bixiyey Xaaladda Guud Ee Caafimaadka Dalka
Next articleWaxa Qaanuunkii Girigii hore ka aminsanaa Gabadha Iyo Nolasheeda!